Chandirayaan-2: Indiyaan imala gara Addeessaa eegalte - BBC News Afaan Oromoo
Chandirayaan-2: Indiyaan imala gara Addeessaa eegalte
22 Adooleessa 2019
Image copyright ISRO
Indiyaan torban darbetti eegaluuf karoorfamee sababa rakkoo teeknikaan haqame kan ture imala hawaa isa lammafaaashee deebitee yaaluufi.
Chandirayaan-2 har'a Wiixata akka biyyittiitti waaree booda sa'aatii 8:43tti wiirtuu haawaa Siriharikotaatii lafarraa ka'e.
Dabalataanis rookkeetiin kun "isa duriirra hedduu jabaatee, mul'ata biyya lammilee biiliyoonaa ol qabduu Adeessatti gessuuf" qophaa'aadha jedha.
Rookkettiin kun utuu imala gara Addeessaa hin eegaliin guyyoota 23 keessa turuuf orbitaa lafaa keessa galeera.
Taateen kun televiziyoonaafi midiyaalee hawaasumma Isro irratti kallatiin tamsaasamera.
Imalli baajata doolara miiliyoona 150 kun bantii Kibba Adeessaarra qubachuun isa jalqaba akka ta'u hawwii dhaabbata hawaa kanaati.
Akka Isro jedhutti imalli Adoolessa 15 taasifamuuf ture sababa "rakkoo teeknikaa kutaa rookkeetii ol dhukaasuu kessatti argameef " jecha ka'umsa karoorfame daqiiqa 56 dura haqame.
Isroon imalli kun lafarra harkifatus deggarsa jiruuf uummata galateeffateera.
''Namoota gara Maarsitti yeroo jalqabaaf imalan keessaa tokko ta'uun fedha''
Ameerikaan namoota gara Ji'aatti erguuf
Imalli kun maal irratti xiyyeefata?
Imalli hawaa Indiyaa bara 2008 - Chandirayaan-1 - adeesarra hin qubatiin hafus, qorannoo adeessarra bishaan barbaaduu isa jalqabaa isa gadi fageenyaan hojjetame gaggeesse ture.
Chandirayaan-2 bantii Kibbaa Adeessaa kan badaa hin qoratamne irra qubachuuf ni yaala.
Ergami imala kanaa dirra adeessarratti xiyyeeffachuun albuudotafi bishaan barbaadu, kirkira adeessarra jiru safaruufi qorrannoowwan biroos ni taasisa.
Indiyaan imala kanaaf rookkeetti cimaa isa qabdu 'Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk-III)' jedhamu fayyadamti. Rookketiin kun ulfaatina Kg 640000 fi dheerina meetira 44 kan qabudha.
Adeessarra qubachuun booda konkolaataan adeessarra suuralee adda adda kaasuun gara lafaatti ni erga.
Adoolessa 27 lafti addeessa gaaddiddeessiti
Dureessi Jaappaan ji'a daawwachuufi
Imalli gara Addeessaa hagam fudhata?
Imalli km 384,000 adeemuuf eegalamu kun Addeessarra fulbaana 6 ykn 7 ni xumurama kan jedhu abdii Isro dha.
Harkisa lafaa (giraavitii) fayyadamuun dhabbatti hawaa kun kallattiwaan imala filateera, kun immoo saatelaayyiti kan gara Addeessaatti furguggeessuuf gargaara.
Saatelaayitiin erga rookketti irra gargar ba'ee gara Addeessaatti waan furguggeefamuuf namooti rookkeetti to'aatan daqiiqaa 15f callisanii ilaaluun alatti homaa goochuu hin danda'ani jedhu hogganaan Isro Dr K Sivan. Satelaayitin kan qubachuu danda'u siistamooti hundi yoo sirritti waliin hojjetan qofa, ta'uu baannaan dirraa adeessarratti kufee caccabaa jedhu Dr Sivan.
Jalqaba waggaa kanaatti yaaliin imala gara Addeessaa Israa'eel jalqabaa satilaayitiin yeroo qubachuuf jedhutti addeessarratti caccabe.
Ergamaimala kanaa irratti injiinarootaafi saayintistoota 1000 ta'antu hirmaate. Yeroo jalqabaaf garuu Isroon ergama hawaa kana dubartiin akka hoggantu filateera.
Dubartooti lama imala gara Addeessa Indiyaa ni gaggeessu. Daariktarri sagantichaa Muthaya Vanitha waggooti dheeraaf Chandirayaan-2 k kunuunsa kan turteyoo ta'u, adeemsu kun kan qajeelfamu Ritu Karidhal kan jedhamtuuni.
Xiyyaar-samiin Isra'eel addeessarratti burkutoofte
12 Elba 2019
Bakka balaliituun hawaa itti of gatan
14 Bitooteessa 2018
Buufanni Hawaa Chaayinaa Tiyaangong-1 jedhamtu Kibba Paasifikitti buute
2 Elba 2018
27 Adooleessa 2018
Rookkeettii Paarkar Soolaar Piroob: Naasaan rokkeettii gara aduutti furguggise
13 Hagayya 2018
'Tuuristiin yeroo jalqabaaf addeessarra ejjetu beekame
18 Fuulbana 2018
Maaliif turtiin barnoota yuunivarsitii inni xiqqaan waggaa afur ta'e?
Ameerikaan Huwaaweef ji'a sadii kennite
Konkolaattonni RIB Matammaatti qabaman qoratamaa jiru
'Waan natti dhaga'amu himannaan mucaakoo na jalaa fudhatu jedheen sodaadhe'
Dubartiin 'ulfa taa'uu hinbeekne' du’a mucaasheetti gaafatamte
Konkolaattonni fe'umsaa qaraxa hinkanfalle dirooniin adamsamaa jiru
Lammii Israa'el gammoojjii Affaar keessa duute maaltu qunname?
Qophii Irreechaa Finfinneef taasifame